Vitamin A to F ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး အသားအရေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတဲ့ Multi-Vitamin Infusion Oil! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Vitamin A to F ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး အသားအရေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတဲ့ Multi-Vitamin Infusion Oil!
Vitamin A to F ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး အသားအရေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုတဲ့ Multi-Vitamin Infusion Oil!
နေ့စဉ်နဲ့အမျှသွားလာလှုပ်ရှားရင်း အသားအရေပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ရန်အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ Skin care Product များကို ပုံမှန်သုံးစွဲလေးရှိကြပါတယ်။ အသားအရေအလိုက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် Product များကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရင်း တခါတလေ Effective သိပ်မဖြစ်သလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ အသားအရေမရွေး သုံးစွဲရန်သင့်တော်ပြီး ဗီတာမင်ဓာတ် ၆မျိုးကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ Multi-Vitamin Infusion Oil လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Infusion Oil မှာ ဗီတာမင် အေ မှ အပ်ဖ် ထိပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးအကြောင်းများကို ပြန်လည်တင်းရင်းစေနိုင်ပြီး Skin Tone ကိုပါပြန်လည်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက်လိုအပ်တဲ့ အဆီဓာတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းညှိပေးပြီး နူးညံ့တဲ့အသားအရေမျိုးကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အသားအရေကိုကြည်လင်စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာများကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Omega-3 နဲ့6ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကိုအပြည့်အဝ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Feather-light Formula နဲ့ဖော်စပ်ထားပြီး အသားအရေအတွင်းလျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတာကြောင့် အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာသူတွေအနေနဲ့ အသုံးပြုရန်သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အသုံးပြုပြီး လေးပတ်အကြာမှာသိသိသာသာကို ကျန်းမာနုပျိုတဲ့အသားအရေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေခြောက်သွေ့သူတွေအနေနဲ့ ၈စက်အထိ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သာမန်အသားအရေပိုင်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ ၇စက် အသုံးပြုသင့်ပြီး Combination Skin ( အဆီပြန် + ခြောက် ) အသားအရေပိုင်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ ၆စက် အသုံးပြုပါ။ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေဆိုရင် ၅စက်ပဲအသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါတယ်။ မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် မျက်နှာသစ်ပြီးစမှာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ လက်ညှိုးထိပ်လေးတွေကို အသုံးပြုပြီး လိမ်းခြယ်နှိပ်နယ်ပေးခြင်းကြောင့် ပိုမိုထိရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကို တွေ့ကြုံခံစားစေမှာ အမှန်ပါပဲ။
Image Source: www.murad.com
မိနစ် ၃၀အတွင်း စိုပြေတဲ့အသားအရေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Murad Nutrient-Charged Water Gel!